Vaovao - Ny feon'ny British Glass dia zava-pisotro mampitandrina amin'ny Scottish DRS
Nampitandrina ny anglisy British Glass fa maro amin'ireo orinasa manakiana ao amin'ny rojo famatsiana ny zava-pisotro no tena tratran'ny Scottish Deposit Return Scheme (DRS).
I Dave Dalton, lehiben'ny mpanatanteraka, British Glass, tamin'ny fihaonana an-tampon'ny tontolo iainana
Noho ny nampidirina tamin'ny taona 2022, nilaza ny ahiahy Britanika fa ny ahiahy dia misy ny mety ho potraka ny famerenana ny famerenam-bary ho an'ny vera, ny fitomboan'ny famonosana plastika sy ny CO2 entona.
Ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Dave Dalton dia nanoratra ho an'ny Governemanta Skotika izay namelabelatra ireo ahiahy ireo, ary nilaza fa hanao izay rehetra azo atao ny Glass Glass mba hitarika ny fampiharana ny DRS mba hahazoana antoka fa ny lafin-javatra manan-danja dia noheverina ary hangataka seza ho an'ny indostrian'ny Vondron'ny Mpanolotsaina Implementation resaka maika.
Niavaka izy, hoy ny filazalazana desarbonisation izay nifanaraka tamin'ny UK's Glass futures ary ny trano fampirimana ho an'ny hoavy any Alemana.
Ny futures fitaratra no ho eto an-tany voalohany azo idirana an-kalalahana sy fandefasana fitaratra matanjaka ary toeram-pikarohana lehibe ho an'ny loharanon-tsolika hafa azo ampiasaina ao amin'ny lafaoro - antony iray lehibe hanampiana ny sehatry ny vera hahatratra ny tanjon'izy ireo hanapotika ny taona 2050 ary ho lasa net- fatra amin'ny fandroana karbônina.
Ny furnace of the Future vao nambara vao haingana dia ho lafaoro goavam-be Hydranika masiaka be voalohany izay mandeha amin'ny angovo azo havaozina 80% eran'izao tontolo izao. Hisolo ny loharanom-angovo angovo famarotana izao sy hanapaka ny famoahana CO2 ny 60%. Amin'ny voalohany iray hafa dia mpamokatra fitaratra fitaratra roapolo no miara-miasa amin'ny famatsiam-bola amin'ny tetik'asa mpanamory ary manaporofo ny foto-kevitra. Ardagh Group dia hanangana ny lafaoro any Alemaina amin'ny 2022, miaraka amin'ny fanombanana ny valiny voalohany tokony alohan'ny taona 2023.
The DRS nomena fitsipika omaly tolakandro (13 Mey) na eo aza ny antso avy amin'ny indostria sy ny mpanjifa ary ny mpanohitra MSPs tokony hahemotra.
Mpikambana SNP (36) nifidy tamin'ny alàlan'ny Conservatives mifidy (16) sy ny Labour ary ny Demokraty liberaly mifady (19).
Hoy i Dave Dalton, lehiben'ny prezidansa Glass Glass: "Tsy irery izahay nangataka ny Governemanta Scottish hanemotra ny lalàna DRS mandra-pahafantatra ny fiantraikan'ny COVID-19. Betsaka ny orinasan'asa, anisan'izany ny ampahany amin'ny indostrianay sy ny rojiste famatsiana dia tsy ao anatin'ny toeran'ny fiatrehana ny enta-mavesatra fanampiny hapetraka ao aminy.
"Manohy mino izahay fa modely iray hafa momba ny mpamokatra (EPR) fanampiny dia hampiakatra ny taham-bolongana fanodinana, lafo kokoa ny vidiny ary manolotra avo roa heny ny CO2 tahiry noho ny DRS any Skotlandia.
“Na dia tsy mino izahay fa ny DRS no vahaolana mety amin'ny famerenam-baravarankely, dia hiara-hiasa amin'ny governemanta Scottish sy ny tompon'andraikitra amin'ny tetika hanamaivana ny fahasimbana eo amin'ny indostrian'ny vera Scottish izahay ary hiantoka ny vidin'ny fanodinana ambony indrindra mety hanome ny kalitao tena ilaina ary habetsaky ny cullet ilaina ho an'ny mpanamboatra fitaratra. ”